‘हामीले पाएको मत दुई तिहाई होइन’ माधवकुमार नेपाल « Khabar24Nepal
‘हामीले पाएको मत दुई तिहाई होइन’ माधवकुमार नेपाल
जेठ १,काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अहिले पनि धेरै जनताको विश्वास जित्न बाँकी रहेको उनले बताए । युवा संघ नेपालको २९ औ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेता नेपालले भने, हामीले ५५ प्रतिशत जनताको मत प्राप्त गरेका छौं, दुई तिहाई होइन ।’
उनले अहंकार छाड्न र जनताको मन जित्ने काम गर्न सुझाव समेत दिएका छन् । अंहकारी दृष्टिकोण, गलत चिन्तन र सर्वश्रेष्ठताको भ्रमले पतनतर्फ डो¥याउने उनको धारणा छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले भने, ‘हाम्रो काम र व्यवहारले जनताको मन जित्न सक्छ । जनताका पीर, मर्कामा सहयोगी भयौं, जनताको दुःख कष्टमा साथ दियौं र जनताको सुखमा पनि रमायौ भने अनि जनताले हामीलाई मन पराउनेछन् ।’
‘जनताका समस्या के हुन् ? चाहना के हुन् ? त्यो सुन्नुहोस् । म जोड दिन चाहन्छु, हाम्रो बानी के भएको छ भने भन्ने धेरै बोल्ने। कम सुन्ने ।’
कम्युनिष्ट नेताहरुको आचरण र व्यवहार परीक्षणमा रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले युवा नेताहरुलाई सचेत समेत गराएका छन् । ‘हाम्रो आचरण र व्यवहारमा कतै ठुला समस्या त खडा भएका छैनन् ? अनौठो खालका विकृतिहरु झांगिएका त छैनन् ? पारदर्शीता छ कि छैन ? कमिटीभित्र सबै कुराहरु छलफल हुन्छ कि हँुदैन ? कामको बाँडफाँड गरिन्छ कि गरिँदैन ? योग्यता क्षमताको मुल्यांकन गरिन्छ कि गरिँदैन ? जम्मै कुराहरुलाई हेर्नुहोस्’ उनले भने, ‘किनभने अन्त्यमा तपाईको व्यवहारले नै मान्छेको मन जित्छ ।’
भाषणको प्रतिष्पर्धामा नजाने भन्दै उनले सामाजिक न्यायसहित सम्मृद्धि मुठ्ठी भरको जमातका लागि नभएको बताएका छन् ।
गुजरातको कच्छमा भारतको सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क बन्‍ने
जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरको प्रमाण दबाएको अभियोगमा पक्राउ